हरेक विहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुहोस् तपाईसँग पैसाको कमी हुनेछैन ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/हरेक विहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुहोस् तपाईसँग पैसाको कमी हुनेछैन !
हरेक विहान उठ्ने बित्तिकै यस्तो गर्नुहोस् तपाईसँग पैसाको कमी हुनेछैन !
घरमा सुख समृद्धि बनाइराख्नको लागि हाम्रा पूर्वजहरुले पहिलेदेखी नै धेरै परम्पराहरु मान्दै आएका छन। तर आजकाल, आधुनिक युगमा धेरै मानिसहरुले पुराना परम्पराहरु मान्न छाडिसके।
ज्योतिष विज्ञानका अनुसार मानिसहरुले त्यस्ता पुराना परम्पराहरुको ध्यान आज पनि राखेमा त्यसबाट सकरात्म फल पाइने वताएका छन्। बिहान सबेरै यस्ता परम्परागत काम गर्नाले घरमा लक्ष्मीको साथमा अन्य सबै देवीदेवताहरुको कृपा पाइन्छ।
१.बिहानबिहानै हत्केला हेर्नुहोस
बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो हत्केला हेर्नुहोस । मान्यता यो छ कि यो काम गर्नाले महालक्ष्मी, सरस्वतीको साथमा भगवान् विष्णुको कृपा समेत मिल्छ।
२.मन्दिर सफा राख्नुहोस
घरको मन्दिरमा मुर्ति र पुजाको सामान सही ढंगले सजाएको हुनपर्छ । यसबाट देवीदेवता प्रशन्न हुन्छन् र कुन्डलीको दोष पनि शान्त हुनसक्छ।
३.बिहानै भुमिलाई प्रणाम गर्नुहोस
बिहान पलङबाट खुट्टा भुँईमा राख्नभन्दा पहिले भुमिलाई प्रणाम गर्न पर्छ । साथमा क्षमा पनि माग्नुपर्छ किनभने धर्तीमा खुट्टा राख्नाले हामीलाई दोष लाग्छ।
४.गाईलाई रोटी खुवाउनुहोस्
सधै बिहान जब रोटी बनाउनुहुन्छ तब पहिलो रोटी गाईको लागि छुट्याउनुहोस । तपाईको घर वरपर गाई छ भने त्यो रोटी गाईलाई खुवाउनुहोस।
५.सुर्यलाई जल चढाउनुहोस्
सधैं बिहान सुर्यलाई जल चढाउन पर्छ । यस उपायबाट घरपरिवार र समाजमा मान सम्मान पाइन्छ र सुर्य सँग सम्बन्धित दोष छ भने त्यसबाट पनि मुक्ति पाइन्छ।
शंख बजाउदा हुने अनेक फाइदाहरु
छोरा भन्दा आमाको उमेर ४ बर्ष मात्रै बढी, सच्याउन जाँदा थुना मा
भ्यागुत्तापछि गधाको पनि विवाह भयो ! विवाह गर्नुको कारण यस्तो